Inqaku leRedmi 7S lisungulwe ngokusemthethweni eIndiya | I-Androidsis
Inqaku leRedmi 7S: Igama elitsha kulwazi oludala
Inqaku leRedmi 7 laziswa ngokusemthethweni ebutsheni balo nyaka. Yifowuni yokuqala yophawu njengophawu olutsha, ukongeza ekungeneni kwayo kuluhlu oluphakathi kwi-Android. Isixhobo esele ukuza kuthi ga ngoku sinendlela elungileyo kwimarike, kunye neentengiso ezigqitha iiyunithi ezizigidi ezine. Ngoku, ukumiliselwa kweRedmi Qaphela 7S kuyabhengezwa.
Le Redmi Qaphela i-7S yiyo Inguqulelo yaleNqaku 7 esungulwe kwimakethi yaseIndiya. Yeyona ntengiso iphambili yeXiaomi, ke ngoko sifumana ingxelo efikelela kuphela kule ntengiso. Nangona olu hlobo lutsha lusizisela utshintsho xa kuthelekiswa nolokuqala.
Kule veki kubekho amarhe malunga nale modeli. Yonke into ibonakalisile ukuba izakuba yinguqulelo eguqulweyo, iprosesa enamandla ngakumbi. Kwaxelwa ukuba uSnapdragon 730, enye yamva nje evela kwiQualcomm, iya kusetyenziswa emnxebeni. Kodwa ekugqibeleni khange kube njalo, njengoko sibonile kwinkcazo-ntetho yakhe.
Ukujonga kwakhona iXiaomi Redmi Qaphela 7
1 Iinkcukacha zeRedmi Qaphela i7S
2 Ixabiso kunye nokuqaliswa
Iinkcukacha zeRedmi Qaphela i7S
Le Redmi Qaphela i-7S isishiya sinenkcazo esazi kakuhle kule meko. Imodeli ekumgangatho ophakathi owenza kakuhle, uyilo olufanayo nefowuni ethiwe thaca ngoJanuwari. Nangona kule meko kugxilwe kwimakethi yaseIndiya ngendlela ecacileyo. Kwakhona ixabiso elikhulu lemali. Oku kukucaciswa kwayo:
Isikrini: I-6,3-intshi Incell LTPS ene-2340 x 1080 isisombululo sepikseli kunye ne-19,5: 9 ratio
Inkqubo: Snapdragon 660
I-RAM: 3 / 4 GB
Ukugcinwa kwangaphakathi: I-32/64 GB (Iyandiswa ifike kwi-512 GB ngekhadi le-MicroSD)
Ikhadi lemifanekisoIadreno 512
Ikhamera esemva: I-48 +5 MP ene-Flash ye-LED
Ikhamera yangaphambili: 13 MP
Ukuxhuma: I-Bluetooth 5.0, 4G / LTE, i-SIM ezimbini, i-WiFi 802.11 Dual, isixhobo sokudibanisa i-USB-C
Abanye: Ukuvula ngokwaziwa kobuso, inzwa yeminwe ngasemva
Ibhetri: I-4000 mAh ene-18W yokutshaja ngokukhawuleza
Inkqubo yokusebenza: I-Android 9.0 Pie ene-MIUI 10 njengobume bokwenza ngokwezifiso
Ubungakanani: X x 159.21 75.2 8.1 mm
U bunzima: Iigram ezili-186
Kutheni le nguqulo intsha ikhutshelwa imarike yaseIndiya? Kungenzeka ukuba uninzi lwenu luzibuza. Ifowuni yayikwazisa e-India ebutsheni balo nyaka, kodwa i-Redmi Qaphela i-India yase-India ayisiyiyo leyo sinako ukuyenza. thenga eSpain. Ukusukela kule meko, ifowuni eyayisungulwe kwilizwe laseAsia ebutsheni balo nyaka yayinekhamera yangemva eyahlukileyo. Endaweni yoluvo lwe-MP ye-48 esinayo kule, Kusetyenziswe enye ye-12 MP. Umahluko ophambili kwifowuni.
Ngoku, kule nguqulo intsha, esungulwe phantsi kwegama iRedmi Qaphela 7S, sifumana ifayile ye Ukucaciswa okufanayo nefowuni leyoSikwazile ukuthenga eSpain iinyanga. Ke le nzwa itshintshiwe ngokulula, ukubonisa umnxeba omtsha osetelwe ukuthengisa kakuhle elizweni. Yinto eqhelekileyo kwiimpawu, ngenxa yoko ayisiyonto emele ukusothusa kakhulu.
Ixabiso kunye nokuqaliswa
Njengoko sele sithethile, le nguqulo yefowuni iza kuphehlelelwa kuphela e-India. Kungenxa yokuba kwezinye iimarike, ezinje ngeSpain, singakwazi ukuyithenga ngokusemthethweni iinyanga. Ukuqaliswa kwayo e-India ngoku kusemthethweni. Ke abo bathengi kweli lizwe bekhangela le Redmi Qaphela i-7S, bangayithenga ngokusemthethweni.
Njengoko bekulindelekile, ifowuni ibiza kakhulu kuneNqaku 7 elasungulwa e-India ekuqaleni konyaka. Sifumana iinguqulelo ezimbini zefowuni ngokuxhomekeke kwi-RAM kunye nokugcinwa kwangaphakathi. Eyokuqala kubo, ene-3/32 GB, isungulwe ngexabiso le-10.999 Indian rupies, emalunga ne-141 euro ngexabiso lotshintshiselwano. Kwelinye icala, uguqulelo lwesibini lweRedmi Qaphela 7S, ene3 / 64 GB, inexabiso ngerandi eyi-12.999, 167, emalunga nee-euro ezili-XNUMX ngexabiso lotshintshiselwano.
Yonke into ibonisa ukuba ifowuni izakubetha eIndiya. Ke ngoko, siza kubona ukuba intengiso iya kunyuka njani nangaphezulu, ngaphaya kwezigidi ezine ezithengisiweyo ukuza kuthi ga ngoku.
Umendo opheleleyo kwinqaku: I-Androidsis » Izixhobo ze-Android » Iiselfowuni » Xiaomi » Inqaku leRedmi 7S: Igama elitsha kulwazi oludala
IVivo isungula ushicilelo olulinganiselweyo lweSpace Knight iQOO, uphawu lomdlalo wokuqala we-brand
Ngaba uGoogle angabhloka iimveliso zaseTshayina ezinje ngeXiaomi okanye i-OnePlus?